Halyey Barcelona ah oo sheegay kooxda ay tahay inuu ku biiro Coutinho, si uu markale horumar u sameeyo – Gool FM
(Barcelona) 24 Abril 2020. Halyey kooxda Barcelona ah ayaa aaminsan in Philippe Coutinho oo hadda qaab amaah ahaan ku joogo Bayern Munich, haddii uu u dhaqaaqo horyaalka Premier League, inuu markale dib u heli doono awoodiisa ciyaareed ee lagu yaqiinay.
Dhinaca kale halyeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa tilmaamay in kooxda Chelsea oo xiiso ka muujisay adeegiisa, inay noqon doonto meel ku habboon kubad sameeyaha reer Seleção.
Wargeyka “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeyga kooxda Barcelona ee Rivaldo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Kaddib hal sano iyo bar oo Barcelona ah, iyo xilli ciyaareed kale oo Bayern Munich ah, Coutinho ma uusan ku guuleysan inuu gaaro guulo la mid ah tii uu la gaaray Liverpool”.
“Philippe Coutinho wuxuu heystaa fursad uu ku sii wadan karo mustaqbalkiisa ciyaareed, kooxda Chelsea-na waxay noqon doontaa doorashada ugu wanaagsan”.
“Coutinho wuxuu ku biiri doonaa koox weyn, dal iyo tartan uu aad u yaqaano, iyo halka uu ku noolaa sanadihiisii ugu fiicnaa ilaa iyo haatan”.
“Haddii ay dhacdo inuu ku biiro, waxaan hubaa inuu heli doono fursad uu horumar ku sameyn karo mustaqbalka, Coutinho runtii wuxuu horrey bandhig fiican kaga sameeyay horyaalka Premier League”.
“Marka aan eegno sannadihii u dambeeyay ee Philippe Coutinho, waxaan sheegi karnaa inuusan gaarin wixii laga filaayey isaga”.
“Haddii uu dib u helo kalsoonidiisa, wuxuu si fudud ku noqon karaa isla ciyaartoygii joogay kooxda Liverpool”.
Ugu dambeyntii halyeyga kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa sheegay guuldaradii qibradeed Coutinho ee kooxda Barcelona inaysan ka dhigneyn inuusan si fiican u ciyaarin, isagoo ka faaloonayana wuxuu yiri:
“Xaladuhu uma soconin sidii loogu talo galay, markii uu ka soo tegey Liverpool isla markaana uu u dhaqaaqay Barcelona”.